Xoghayaha Dawlada hoose ee Berbera oo Noqday Dhalinyarada ugu Firfircoon ee Waxqabadka Balaadhan Sameeyey Mudadii uu Xilka hayey iyo Hibooyinka gaar ah ee Ilahay ku Mannaysta.. Bye Hodan Cali Maxamed | IctiraafNews.com
Xoghayaha Dawlada hoose ee Berbera oo Noqday Dhalinyarada ugu Firfircoon ee Waxqabadka Balaadhan Sameeyey Mudadii uu Xilka hayey iyo Hibooyinka gaar ah ee Ilahay ku Mannaysta.. Bye Hodan Cali Maxamed
Xoghayaha Dawlada hoose ee Berbera Md. Cabdikariin Aadan Cadde ayaa kamid noqday shaqsiyaadka dhalinyaradda ah ee sida daacadda ah u gutay waajibaadkoodii shaqo ee ay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland u hayeen. Waxanu Tan iyo mudadii uu xilka Xoghayenimada Dawlada hoose ee Berbera hayey ku suntanaa waxqabad iyo gacanka gaysashada xalinta khilaafaadka dhinaca bulshada muranada soo kala dhexgala. Waxanu Xoghaye Cabdikariin Aadan Cadde fuliyey mashaaric badan oo horumarineed, kuwasoo ka hirgalay gudaha magaaladda Berbera. Sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay mashaaric horumarineed oo aan tiro iyo cadad lahayn, kuwasoo qaarkood hada socdaan, halka kuwo kalena la bilaabmi doonan sannaadkan cusub ee 2017-ka.
Waxa kaloo uu Xoghayaha Dawlada hoose ee Berbera Md. Cabdikariin Aadan Cadde fuliyey
mudadii uu xilka xoghayenimo ee Dawladda hoose ee Berbera hayey adeegyo bulsho oo faro badan, waxanu ahaa shaqsi waqtigiisa inta badan u hibeeyey fadhiyida Xafiiskiisa si uu ugu adeego umadda uu xilka u hayo. Waxanu xoghaye Cabdikariin Aadan kamid ahaa dadka faro ku tiriska ah ee samo talisnimada jecel, isagoo door leexaad leh ka ciyaaray xalinta Mushkiladaha dhinaca dhulka oo ah mida ugu badan ee khilafka ka dhex dhaliya bulshada qaybaheedda kala duwan.
Cabdikariin Aadan Cade waxa uu caan ku yahay dhexgelida iyo ka garnaqista mushkiladaha dhulka sidii aan soo sheegnay, waxanu hormuud u noqday inuu yaraado muranada dhulkii. Sidoo kale masuul Oday nabadeed Cabdikariin Aadan waxa uu hirgelinta arrimahaas la kaashadda Gudoomiyaha golaha deegaanka Caasimada gobolka Saaxil ee Berbera Md. Cabdishakuur Maxamud Xasan (Cidin) oo isagga laftiisu yahay xubnaha waxqabadka iyo daacadnimada ku suntan iyo weliba Xildhibaanada golaha deegaanka Berbera oo ah kuwo isla jaan qaaday.
Dhinaca kale, Xoghaye Cabdikariin Aadan Cadde waxa uu hibo Ilahay u siiyey Mansabyo badan oo waxka taraaya dhinaca bulshada, waxana kamid ah Mansabyadaas Hibo Abwaanimo, isagoo iska leh Heeso kala duwan oo Saameyn ku leh bulshada iyo Gabayo ka hadlaya dhinacyo badan, iyo Weliba qaybaha suugaantu ka kooban tahay. Waxa kaloo intaas u raacda oo kamid ah hibooyinka ilahay ku mannaystay Xoghayaha Dawladda hoose ee Berbera Md. Cabdikariin Aadan Cadde isla markaana bulshada uu wax ugu qabtaa, waa Qoraa bugaagta iyo sidoo kalena waa Hoggaamiye Cilmiga bulshadiisa uga faaideeya. La soco qaybaha dambe.
Hodan Cali Maxamed